ပင်မ LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ Features - LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် | လွှဲပြောင်းတိပ် | ကော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Professional ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်ကားအရောင်းဆိုင်ပုံနှိပ်
နေအိမ် » ပင်မ LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ Features
LDPE ရုပ်ရှင်အဓိကအားဖြင့်ထုပ်ပိုးအတွက်အသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာထုပ်ပိုးအဖြစ်, စက်မှုဇုန်အစိတ်အပိုင်းများ, ဖိနပ်, အဝတ်အစား, စသည်တို့ကို, ဒါပေမယ့်အလိုအလျောက်ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်သကြားတွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်, ဆားငန်, စသည်တို့ကို. It is widely used in the fields of agriculture and cable industry.
If you want to know more about main features of ldpe protective film or our products, such as 3m protective film, auto protective film, stainless steel protective film, pe protective film, စသည်တို့ကို, you can contact us directly.
မူပိုင် © 2020 ဂွမ်ဒေါင်း HUALIBAO CO ။ , LTD မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.